Winston – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
NOTE :: This page is written in English intentionally. Please DO NOT translate. Government directives concerning using Myanmar Unicode Standard fonts within Myanmar as well as requirement for imported electronic devices. Mobile Phone import directive – June 8 2018 – Myanmar Version Mobile Phone import directive – June 8 2018 – English Translation Using Unicode Read More …
NOTE :: This page is written in English intentionally. Please DO NOT translate. Preface ::: Major technological providers ( Facebook, Viber, etc ) provide autoconversion services to Myanmar ( and South East Asia region lately as of October 2020 ) from Zawgyi to Unicode encoding. BUT those good intentioned efforts are making people’s lives even Read More …
MUA Workshop – September 22 2019
Posted on September 21, 2019 AuthorWinston2 Comments
Myanmar Unicode Area က ဦးဆောင်ပြုလုပ်ပြီး Pentagon Engineering Group မှ နေရာထိုင်ခင်းအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးထားသည့် Unicode Workshop ကို အမှတ် (၂၀၃)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅ လမ်း အပေါ်ဘလောက်တွင် လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ ၂၂.၉.၂၀၁၉ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူလိုသူများ အနေဖြင့် Workshop သို့ ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲလိုသောဖုန်းများ၊ ကွန်ပျူတာများကို ယူဆောင်လာကြပါရန်နှင့်၊ အသုံးပြုသူလိုသူများ၏ အခက်အခဲများကို တတ်စွမ်းသမျှ ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ ယူနီကုဒ်ထည့်သွင်းခြင်း နှင့် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်းခြင်းများကို တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသူများ အနေဖြင့် နံနက် ၁၀ နာရီ မှ ညနေ ၄ နာရီအတွင်း လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Posted on July 25, 2019 October 25, 2019 AuthorWinston2 Comments
ယူနီကုဒ်သုံးကြစို့ ယူနီကုဒ်လို့ပြောလိုက်ရင် ယူနီကုဒ်ဆိုတဲ့နံမည်စိမ်းစိမ်းကြီးကို ဘာမှန်းမသိပဲ ဘာလို့သုံးခိုင်းနေတာလဲ၊ တို့ဘာသာတို့ အခုလည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ စာရိုက်လို့ရတယ် ဖတ်လို့ရတယ်လေ၊ အလကားအလုပ်ရှုပ်လို့ကွာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ယူနီကုဒ်အကြောင်းမပြောခင်မှာ စကားဦးအနေနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်မြန်မာစာအကြောင်း အရင်ပြောပါရစေ။ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများမှာ ခဲစာလုံးနဲ့ ပုံနှိပ်တဲ့ခေတ်ကနေ ကွန်ပျူတာနဲ့ စာစီစာရိုက် ပုံနှိပ်ခြင်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ် မြန်မာစာ ခေတ်ဦးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဆိုတာကြီးက ဘာသာစကားတွေကိုမသိပါဘူး။ သူ့အနေနဲ့ အက္ခရာစာလုံးတစ်လုံးကို နံပါတ်တစ်ခု အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး သိမ်းတယ် ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကာလက ကွန်ပျူတာများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အကန့်အသတ်များရှိတဲ့အတွက် မြန်မာစာလုံးများကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများနဲ့ ညီမျှတဲ့ နံပါတ်များနဲ့ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ ရေးသားနိုင်တဲ့ မြန်မာဖောင့်များကို အက်စ်ကီးဖောင့်( ASCII Font) လို့ခေါ်ကြပြီး မြစေတီ၊ ရွှေ၊ ဝင်းမြန်မာ Read More …
အစိုးရဌာနများ အနေဖြင့် ကွန်ပျူတာနှင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံး မြန်မာစာကို မြန်မာ ယူနီကုဒ် (ပြည်ထောင်စုဖောင့်) စနစ်ဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာများက စတင် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိ အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စနစ်ကို အများပြည်သူ သုံးစွဲရ လွယ်ကူစေရန် ရေးဆွဲထား သော ဇော်ဂျီဖောင့်နှင့် ယူနီကုဒ်ဖောင့်များကို သုံးစွဲလျက်ရှိပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသော မြန်မာ စာ စံစနစ် ဖြစ်စေရန် အတွက် မြန်မာယူနီကုဒ်(ပြည်ထောင်စုဖောင့်)ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန Read More …